Hartfalen Somalisch - Voorlichting Vertaald
Home huisarts Hartfalen Hartfalen Somalisch
Cudurka wadnaha iyo xididaha
Waa maxay Hawl-gabida Wadnaha
Cudurka wadnaha iyo xididaha (CVD) waa erey guud oo loo isticmaalo xaaladaha saameeya wadnaha ama xididdada dhiigga.
Caadi ahaan waxay la xiriirtaa ururinta kaydka dufanka leh ee gudaha halbowlayaasha (atherosclerosis) iyo khatarta sii kordheysa ee xinjirowga dhiigga. Waxa kale oo lala xidhiidhin karaa dhaawaca xididdada dhiigga ee xubnaha sida maskaxda, wadnaha, kelyaha iyo indhaha. Cudurka wadnaha iyo xididada waa mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee dhimashada, laakiin inta badan waxaa si weyn looga hortagi karaa in lagu hogaantamo qaab nololeed caafimaad leh.
Sababaha keena cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga
Sababta saxda ah ee cudurka Wadnaha iyo xididaha ma cadda, laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo kordhin kara halista aad ku qaadi karto. Kuwaas waxaa loo yaqaan "arimaha khatarta ". markaad leedahay arimaha khatarta ah oobadan, waa sii kordhaya fursadahaaga aad ku qaadi karto cudurrada wadnaha iyo xididaha. Arrimaha ugu muhiimsan ee halista u ah cudurrada Wadnaha iyo xididdaha dhiigga ayaa hoos lagu qeexay.
Dhiig karka (hypertension) waa mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee halista u ah cudurrada Wadnaha iyo xididdaha dhiigga. Haddii bereesharka dhiiggaagu aad u sarreeyo, wuxuu dhaawici karaa xididdaha dhiiggaaga.
Wax badan ka akhri dhiig karka .
Sigaar cabista iyo isticmaalka tubaakadooyinka kale waa arrin halis weyn u ah cudurrada Wadnaha iyo xididdaha dhiigga. Walxaha waxyeelada leh ee ku jira tubaakada waxay dhaawici karaan oo cidhiidhin karaan xididdada dhiiggaaga..
Kolestaroolku waa walax dufan leh oo laga helo dhiigga. Haddii aad leedahay kolestarool sare, waxay keeni kartaa in xididdaha dhiiggaaga ay yaraato oo ay kordhiso khatarta ah inaad yeelato xinjir dhiig
Wax badan ka akhri kolestaroolka sare.
Sonkorowga waa xaalad intuu qofka noolyahay oo qabi karo oo keenta in heerka sonkorta dhiiggaagu aad u sarreeyo. Heerarka sonkorta dhiigga oo sarreeya waxay dhaawici kartaa xididdaha dhiigga, taasoo ka dhigaysa inay noqdaan kuwo cidhiidhi ah. Dad badan oo qaba nooca 2-aad ee sonkorowga ayaa sidoo kale ah kuwo cayilan ama aad u cayilan, taas oo sidoo kale ah arrin halis u ah cudurrada Wadnaha iyo xididdada.
Haddii aanad si joogto ah u samayn jimicsi, waxa ay u badan tahay in uu kugu dhaco dhiig karka, heerka kolestaroolka oo sarreeya iyo in aad cayisho. Dhammaan kuwan waa arrimo halis u ah cudurrada Wadnaha iyo xididdaha dhiigga.
Jimicsiga joogtada ah ayaa kaa caawin doona in uu caafimaadka wadnahaaga ilaaliyo. Marka lagu daro cunto caafimaad leh, jimicsigu wuxuu sidoo kale kaa caawin karaa inaad ilaashato miisaan caafimaad leh.
Miisaan badan ama cayil
Miisaan culus ama cayil waxay kordhisaa halista aad ugu qaadi karto sonkorowga iyo dhiig karka, labaduba waa arrimo halis u ah CVD.
Waxaad halis dheeraad ah ugu jirtaa CVD haddii:
● aad tusmada cufka jirka (BMI) uu yahay 25 ama ka sare.
● aad tahay nin oo cabbirkiisa caloosha yahay 94sentimiter (oo lamidah 37 inches) ama ka badan, ama qof dumar ah oo cabbirkeeda caloosha tahay 80sentimitir (qiyaastii 31.5 inches) ama ka badan
Taariikhda qoyska ee cudurka Wadnaha iyo xididdaha dhiiga
Haddii aad leedahay taariikh qoys oo ku saabsan cudurrada Wadnaha iyo xididdada dhiigga, khatarta aad u leedahay in uu kugu dhaco sidoo kale waa kordhaysaa.
Waxaa laguu tixgelinayaa inaad leedahay taariikh qoys oo ku saabsan cudurka Wadnaha iyo xididdada dhiigga haddii midkood:
Aabahaa ama walaalkaa waxaa laga helay cudurka Wadnaha iyo xididdaha ka hor intaysan gaarin 55 jir
Hooyadaa ama walaashaa waxaa laga helay cudurka Wadnaha iyo xididdaha ka hor inta aysan gaarin 65 jir
U sheeg dhakhtarkaaga ama kalkaalisada haddii aad leedahay taariikh qoys oo ku saabsan cudurrada Wadnaha iyo xididdaha dhiigga. Waxa laga yaabaa inay kugula taliyaan in la hubiyo bereesharka dhiiggaaga iyo heerka kolestaroolkaaga.
Cudurka wadnaha iyo xididduhu wuxuu ku badan yahay dadka koonfurta Aasiya iyo Afrikaanka ama karribiyaan-ka.
Sababta oo ah dadka ka soo jeeda asalkan waxay u badan tahay inay yeeshaan arrimo kale oo halis u ah cudurrada Wadnaha, sida dhiig karka ama nooca 2 ee sonkorowga.
Arimaha kale ee khatarta ah
● da'da - Cudurada wadnaha iyo xididaha ayaa ku badan dadka da'doodu ka weyn tahay 50, khatarta aad u leedahay inuu kugu dhacona way korodhaa markaad sii weynaato
● jinsiga - ragga ayaa aad ugu dhow inay ku dhacaan cudurrada wadnaha iyo xididdaha da' ahaan ka hor dumarka
● cunto - cunto aan caafimaad qabin waxay u horseedi kartaa kolestarool sare iyo dhiig karka. Ha cunin cunto badan oo baruur iyo milix leh.
● aalkolada - Isticmaalka khamriga ee xad-dhaafka ah wuxuu kaloo kordhin karaa kolestaroolkaaga iyo bereesharka dhiiggaaga, waxayna gacan ka geysataa korodhka miisaanka
Waxaad u baahan doontaa inaad marar badan kaadido habeenkii. Dhaqso aya neefta wayneysaa markaad jimicsi sameyso. Waxaa laga yaabaa inaad dareento neefta oo dhib kugu noqota markaad jiifsato ama jimicsi sameyso.
Qayb ka mid ah baaritaankan waxa ay ku lug leedahay qiimaynta khatarta cudurrada Wadnaha iyo xididdaha dhiigga ee shakhsi ahaaneed iyo talinta sida loo yareeyo haddii loo baahdo.